လူ ၁၀၀ မှာ ၉၈ ယောကျလောကျ အဖွမှေနျမရတဲ့ သင်ျခြာပုစ်ဆာတဈပုဒျ – Focus Myanmar
လူ ၁၀၀ မှာ ၉၈ ယောကျလောကျ အဖွမှေနျမရတဲ့ သင်ျခြာပုစ်ဆာတဈပုဒျ
ဂဏနျးပေါငျးစကျမပါပဲနဲ့ ဒီပုစ်ဆာကို မှနျအောငျ ဖွဆေိုနိုငျရငျတော့ သငျဟာ သင်ျခြာမှာဆရာတဈဆူ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ လှယျကူရိုးရှငျးတဲ့ ပုစ်ဆာတဈပုဒျဖွဈပမေယျ့ လူအယောကျ ၁၀၀ ဖွရေငျ ၉၅ ယောကျလောကျက တူညီတဲ့အဖွမှေားထှကျတဲ့ ပုစ်ဆာဖွဈပါတယျ။
ဒီပုစ်ဆာရဲ့ အဖွမှေနျက ဘယျလောကျဖွဈမလဲ..?
ဂဏနျးပေါငျးစကျမပါပဲ သငျတှကျကွညျ့ပွီးရငျတော့ အောကျမှာ အဖွတေိုကျနိုငျပါပွီ။
လူအတျောမြားမြားက ဒီပုစ်ဆာကို ရိုးရှငျးစှာပဲ အစဉျလိုကျပုံစံနဲ့ ဘယျဘကျကနေ ညာဘကျကို တဈဆငျ့ခွငျး ဖွရှေငျးသှားတတျကွပါတယျ၊ အဲဒီအတှကျ နောကျဆုံးအဖွကေ “0” ရကွပါတယျ။
(9 – 9) ÷9+9–9÷9= ?
(0 ÷ 9) +9–9÷9= ?
(0 + 9) –9÷9= ?
(9 – 9) ÷9= ?
အားနီးလုံးပါးရဲ့ အဖွကေ “0” တူညီတာကွောငျ့ အဖွမှေနျတယျလို့ မယူဆစခေငျြပါဘူး၊ တဈကယျတော့ ဒီပုစ်ဆာအတှကျ “0” အဖွကေ အမှား ဖွဈပါတယျ။
သင်ျခြာရဲ့ သဘောတရား သီအိုရီမှာ ပုစ်ဆာတဈပုဒျကို ဖွရှေငျးတဲ့အခါ အတိုကောကျ “BEDMAS” နညျးနဲ့ ဖွရှေငျးမှသာ အဖွမှေနျထှကျပါတယျ။
B = Bracket ပထမ ကှငျးခတျတှေ ရှငျးပါ
E = Exponent ဒုတိယ ထပျညှနျးကိနျးတှေ ရှငျးပါ
D = Division တတိယ အစားလက်ခဏာ ရှငျးပါ
M = Multiply စတုတ်ထ အမွှောကျလက်ခဏာ ရှငျးပါ
A = Add ပဉ်စမ အပေါငျးလက်ခဏာ ရှငျးပါ
S = Subtraction အနုတျလက်ခဏာ ရှငျးပါ
ဖျောပွပါ အဆငျ့အတိုငျး အဆငျ့ဆငျ့ တှကျခကျြမှ မှနျကနျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပုစ်ဆာရဲ့ တှကျနညျးအမှနျက –
အဖွမှေနျက ၁၆ ဖွဈပါတယျ။ အဖွမှေနျရသူတှအေားလုံးအတှကျ ဂုဏျယူပါတယျ။
အဖွမှေနျမရသူတှအေနနေဲ့ စိတျခယြုံကွညျခငျြရငျတော့ ဂဏနျးပေါငျးစကျတဈလုံး ယူလိုကျပွီး “9–9÷9+9–9÷ 9” အတိုငျး ဆကျတိုကျနှိပျသှားပါ၊ အားလုံးပွီးမှ “=” ညီမြှခွငျးကို နှိပျကွညျ့လိုကျပါ။ အဖွမှေနျရလာပါလိမျ့မယျ။
လူ ၁၀၀ မှာ ၉၈ ယောက်လောက် အဖြေမှန်မရတဲ့ သင်္ချာပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်
ဂဏန်းပေါင်းစက်မပါပဲနဲ့ ဒီပုစ္ဆာကို မှန်အောင် ဖြေဆိုနိုင်ရင်တော့ သင်ဟာ သင်္ချာမှာဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပေမယ့် လူအယောက် ၁၀၀ ဖြေရင် ၉၅ ယောက်လောက်က တူညီတဲ့အဖြေမှားထွက်တဲ့ ပုစ္ဆာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုစ္ဆာရဲ့ အဖြေမှန်က ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ..?
ဂဏန်းပေါင်းစက်မပါပဲ သင်တွက်ကြည့်ပြီးရင်တော့ အောက်မှာ အဖြေတိုက်နိုင်ပါပြီ။
လူအတော်များများက ဒီပုစ္ဆာကို ရိုးရှင်းစွာပဲ အစဉ်လိုက်ပုံစံနဲ့ ဘယ်ဘက်ကနေ ညာဘက်ကို တစ်ဆင့်ခြင်း ဖြေရှင်းသွားတတ်ကြပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် နောက်ဆုံးအဖြေက “0” ရကြပါတယ်။
အားနီးလုံးပါးရဲ့ အဖြေက “0” တူညီတာကြောင့် အဖြေမှန်တယ်လို့ မယူဆစေချင်ပါဘူး၊ တစ်ကယ်တော့ ဒီပုစ္ဆာအတွက် “0” အဖြေက အမှား ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ချာရဲ့ သဘောတရား သီအိုရီမှာ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ အတိုကောက် “BEDMAS” နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမှသာ အဖြေမှန်ထွက်ပါတယ်။
B = Bracket ပထမ ကွင်းခတ်တွေ ရှင်းပါ
E = Exponent ဒုတိယ ထပ်ညွှန်းကိန်းတွေ ရှင်းပါ
D = Division တတိယ အစားလက္ခဏာ ရှင်းပါ
M = Multiply စတုတ္ထ အမြှောက်လက္ခဏာ ရှင်းပါ
A = Add ပဉ္စမ အပေါင်းလက္ခဏာ ရှင်းပါ
S = Subtraction အနုတ်လက္ခဏာ ရှင်းပါ
ဖော်ပြပါ အဆင့်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် တွက်ချက်မှ မှန်ကန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုစ္ဆာရဲ့ တွက်နည်းအမှန်က –
အဖြေမှန်က ၁၆ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေမှန်ရသူတွေအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အဖြေမှန်မရသူတွေအနေနဲ့ စိတ်ချယုံကြည်ချင်ရင်တော့ ဂဏန်းပေါင်းစက်တစ်လုံး ယူလိုက်ပြီး “9–9÷9+9–9÷ 9” အတိုင်း ဆက်တိုက်နှိပ်သွားပါ၊ အားလုံးပြီးမှ “=” ညီမျှခြင်းကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဖြေမှန်ရလာပါလိမ့်မယ်။